Xayeysiinta Asaliga ah ee Suuqgeynta Mawduucyada: 4 Talooyin iyo Xeelado | Martech Zone
Suuqgeynta waxyaabaha laga helayaa waa meel walba oo weyna sii adkaanaysaa in rajo laga dhigo macaamiisha waqtiga buuxa maalmahan. Ganacsi caadi ah si dhib yar ayuu ku gaari karaa wax kasta oo leh habab dhiirrigelin lacag leh, laakiin wuxuu si guul leh kor ugu qaadi karaa wacyiga isla markaana uu ku wadi karaa dakhliga isagoo adeegsanaya xayeysiis hooyo.
Tani maahan fikrad ku cusub barta internetka, laakiin noocyo aad u tiro badan ayaa wali ku guuldareysanaya inay ka faa'iideystaan ​​inta ugu badan. Waxay sameynayaan qalad weyn maadaama xayeysiinta wadaniga ahi ay cadeyneyso inay tahay mid ka mid ah taatikada kor u qaadista ugu faa iidada badan taas oo inta badan damaanad qaadaysa inay gaarsiiso soo celinta maalgashiga.
Laakiin sidee buu u shaqeeyaa? Ma sameyn kartaa isku dheelitirnaan sax ah oo udhaxeysa xayeysiinta udhaxeysa iyo suuqgeynta waxyaabaha ku jira Haddii aadan run ahaantii hubin sida looga jawaabo labadan su'aalood, sii wad akhriska si aad u barato mabaadi'da aasaasiga ah ee xayeysiinta u dhashay ee suuqgeynta waxyaabaha ku jira.
Wax qarsoodi ah maahan in suuq-geynta waxyaabaha ku jira ay xukumayaan caalamka dijitaalka ah, laakiin sidee looga hadlayaa xayeysiinta hooyo? Haddii aad runtii rabto inaad ogaato sida ay u shaqeyso, waa inaad fahamtaa macnaheeda oo aad eegtaa istaatistikada aasaasiga ah ee arimahan.
Xayeysiinta Dhaladku waa adeegsiga xayeysiisyada lacagta lagu bixiyo ee u dhigma muuqaalka, dareenka, iyo shaqada qaabka warbaahinta ee ay ka muuqdaan. Inta badan waxaad ku arki doontaa xayeysiisyada asaliga ah inay yihiin qaybo ka mid ah warbaahinta bulshada ee la soo wariyay ama websaydhka aad jeceshahay sida talooyinka maqaalka.
Tirakoobka Xayeysiinta Dhaladka ah
Noocyada noocan ah waxay u egyihiin xulashada tifaftirka caadiga ah ee isgaarsiinta la siinayo. Tani waa sida saxda ah ee ka dhigaysa xayeysiinta waddanka mid wax ku ool ah oo lagu kalsoonaan karo:
Xayeysiisyada bandhigga asaliga ah waxay soo saaraan qiime-guji (CTR) 8.8 jeer ka sarreeya xayeysiisyada muujinta caadiga ah.
70% macaamiisha halkii aan ka baran lahaa waxyaabaha ku saabsan waxyaabaha ka kooban xayeysiisyada dhaqameed.
Saddex meelood meel ka mid ah dadka isticmaala ayaa hela waxyaabaha la soo jeediyey inay noqoto qaabka ugu faa iidada badan ee xayeysiinta wadaniga ah.
Xayeysiistayaasha Mareykanka ayaa qarash gareeya ku dhowaad $ 44 bilyan on xayeysiiska hooyo sanad walba.
Faa'iidooyinka Xayeysiinta Dhaladka ah ee Suuqgeynta Mawduuca
Xayeysiinta asaliga ah waa iska cadahay inay awood leedahay, laakiin waa inaad ogaataa inay la timid baaxad ballaaran oo faa'iidooyin wax ku ool ah. Waa kuwan faa'iidooyinka ugu waaweyn ee xayeysiinta u dhashay ee suuqgeynta waxyaabaha ku jira:
Xayeysiisyada udhaxeeya ma ahan kuwo faragalin ah: Si ka duwan qaababyada kale ee xayeysiiska ah, xayeysiisyada udhaxeeya waa kuwo si fudud ula dhaqma oo aan ku lug lahayn. Sida magaca ka muuqata, xayeysiisyada noocan oo kale ah waxay u muuqdaan kuwo dabiici ah oo dabiici ah, taas oo ka dhigaysa iyaga kuwo laga jecel yahay marka loo eego xayeysiiska banner ama popups.
Xayeysiinta asaliga ah waa aamin: Dadku waxay inta badan tixgeliyaan xayeysiiska u dhashay inay yihiin kuwo la isku halleyn karo oo lagu kalsoonaan karo. Maaha wax lala yaabo, gaar ahaan haddii aad abuurto isku dar isku dhafan oo ah xayeysiinta iyo suuqgeynta waxyaabaha ku jira. Xaaladdan oo kale, waxaad ku qancin kartaa dhagaystayaasha kaliya waxyaabo xayeysiis xeel dheer leh.
CTR sare: Xayeysiinta asaliga ah waxay leeyihiin qiime aad u sareeya oo gujinaya (CTR) marka loo eego foomamka xayeysiinta caadiga ah, taas oo ah cawaaqibka kalsoonidooda iyo kalsoonidooda. Xayeysiinta noocan ah maahan mid aad u riixrixan, sidaa darteed dadka isticmaala ma ogaanayaan inay cunaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin ayna ugu dambeyn la falgalaan
Xayeysiiska asaliga ah ayaa ku habboon qof walba: Isku-darka xayeysiinta udhaxeeya iyo abuuritaanka nuxurka ayaa sifiican ugu habboon qof kasta oo ganacsiga ku lug leh. Macaamiisha way jecelyihiin maxaa yeelay waxay soo gudbiyaan nuxur tayo leh, halka daabacayaashu ay jecelyihiin maxaa yeelay faragalin kuma sameynayaan qoraallada dabiiciga ah. Ugu dambeyntiina, xayeysiiyayaashu waxay jecel yihiin xayeysiinta waddaniga ah maxaa yeelay waxay bixisaa natiijooyin bartilmaameed ah.
Xayeysiinta asaliga ah waxay ku habboon tahay dhammaan barnaamijyada: Waxaad ku daabici kartaa xayeysiisyada udhaxeeya ku dhowaad kanaal kasta oo isgaarsiineed oo jira. Laga soo bilaabo warbaahinta bulshada iyo bogagga shabakadaha iyo joornaalada dhaqameed, xayeysiinta waddani waxay ku habboon tahay dhammaan dhexdhexaadiyaasha.
4 Siyaabood oo Lagu Kordhiyo Xayeysiiska Dhaladka
Hadda oo aad fahantay astaamaha muhiimka ah ee xayeysiinta waddaniga ah, waxa kaliya ee haray ayaa ah in la barto sida loogu lammaaneeyo dadaalka suuqgeynta waxyaabaha aad ka kooban tahay. Waxaan kuu diyaarinaynaa liis ah afar talooyin wax ku ool ah iyo tabaha:
Talo #1: Ku samee dhageystayaasha maskaxdaada
Xeerka ugu horreeya ee xayeysiinta waddanku maaha inuu ahaado mid calaamadeysan oo wax lagu qoro dhagaystayaasha bartilmaameedka ah ee maskaxdaada ku jira. Ha iloobin in waxqabadka sare ee xayeysiintu aysan ahayn wax ka badan waxyaalo ka sarreeya oo ku dhiirrigelinaya akhristayaasha xamaasad iyo tayo sarreysa.
Shaqadaadu waa inaad falanqeyso danaha rajadaada oo aad diirada saarto mawduucyada ku habboon filashooyinkooda, rajadooda, baahidooda, iyo waxay aaminsan yihiin.
Jake Gardner, ah shaqo bixiyaha at adeegyada qoraalka xirfadeed, ayaa sheegay inay muhiim tahay in la fahmo sida macaamiisha uga fikiraan mowduuc la siiyay: “Isku day inaad ogaato dhibaatooyinka ay la tacaalayaan. Habkaas, waxaad diyaarin kartaa waxyaabo tayo sare leh oo dadka ku dhiirrigeliya inay ficil sameeyaan markay wax akhriyaan. ”
Isla mar ahaantaana, waa inaad ka fekertaa kanaalada ugu wanaagsan ee loo qaybiyo. Ma rabtaa inaad ku soo bandhigto xayeysiis shabakadaha bulshada ama aad raacdo boggaga lagula taliyay? Taladayada ayaa ah in laga faa'iideysto kanaalka aad ogtahay inuu gaarayo bartilmaameedkaaga gaar ahaan.
Talo #2: Abuur nuqullo taagan
Inta badan suuqleydu waxay tixgeliyaan caarada labaad inay tahay mid muhiim ah maxaa yeelay waxay ka dhigeysaa dhammaan farqiga u dhexeeya ololeyaasha guuleysta iyo xayeysiiska hooseeya. Magac ahaan, waa inaad sameysaa inta ay qaadaneyso oo dhan si aad ugu diyaariso nuqul istaagaya xayeysiis kasta oo u gaar ah shaqsi ahaan.
Marka horeba, waxa ku jira waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo xog-ogaalnimo sare leh, waxbarasho leh, iyo / ama madadaalo leh. Marka labaad, xayeysiisyada waddaniga ah waxaa laga filayaa inay noqdaan kuwo ujeedo leh oo aan eex lahayn. Ujeeddadu waa in la sameeyo gabagabo xog ku saleysan oo lagu taageerayo hadaladaada caddayn.
Isla mar ahaantaana, qoraaladaadu waa inay noqdaan kuwo kaamil ah xagga higgaadinta iyo naxwaha. Khalad keliya ayaa burburin kara sumcaddaada, sidaa darteed waxaad si fiican u hubin kartaa qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha ku jira laba jeer ka hor intaadan noolaan. Haddii dib u akhrintu aysan ahayn waxaaga, waxaan si xoogan kuugu dhiirigalinaynaa inaad ka faa'iideysato aaladaha casriga ah sida Grammarly or Hemingway.
Talo #3: Tayaynta bogga soo degida
Ujeedada kama dambaysta ah ee dhammaan xayeysiisyada hooyo waa in loo weeciyo isticmaaleyaasha bogga u dhigma. Xaaladahaas oo kale, waa inaad hubisaa in boggaaga degitaanka uu si habboon ugu habboon yahay farriinta waxyaabaha aad abuurtay.
Waxaa muhiim ah in la isticmaalo isla qaabkii iyo qaabkii nuqul-sameynta si loo hubiyo heerka ugu habboon ee joogteynta sumadda. Dabcan, bogga soo degitaanku waa inuu dhiirrigeliyaa badeecada ama adeegga rajadaadu ka akhrisan karto.
Ugu dambeyntiina, boggan waa inuu ka kooban yahay wacitaan ficil oo muuqda oo waxqabad (CTA). Badhanka CTA oo si fiican u taagan ayaa dadka martida ah siinaya tilmaamo dheeraad ah waxayna tusaan sida ay uga hawl galaan markay soo degayaan.
Talo #4: Cabir in la hagaajiyo
Tilmaamaha ugu dambeeya ee ku yaal liistadayadu waa in la cabbiro natiijooyinka ka kooban xayeysiiskaaga hooyo maxaa yeelay waa habka keliya ee lagu hagaajin karo ololeyaasha mustaqbalka. Hawshani waa mid aad u fudud haddii aad dejiso yoolalka saxda ah oo aad go'aamiso tilmaamayaasha waxqabadka muhiimka ah (KPI).
Guud ahaan marka laga hadlayo, xayeysiiyayaal badan ayaa diirada saaraya laba qodob - aragtida iyo qasabadaha. In kasta oo labada KPI ay runtii muhiim yihiin, waxaan soo jeedinaynaa in diiradda la saaro qodobka saddexaad ee si toos ah u muujinaya guusha ama guuldarada ololahaaga. Waxaan ka hadleynaa ka-qaybgal-guji ka dib-guji, halbeeg muhiim ah oo si cad u muujinaya waxqabadka xayeysiinta hooyo.
Abuuritaanka nuxurka waa mid ka mid ah fikradaha suuqgeynta ugu saameynta badan xilligeenna, laakiin ma sahlana inaad ka hesho booskaaga qorraxda dhijitaalka ah tartamayaal aad u fara badan oo niche kasta leh. Tani waa halka tallaabada xayeysiinta ee waddanku ay ka caawinayso ganacsiyada kor u qaadista ka-qaybgalka isticmaalaha.
Mashruucan, waxaan ku sharaxnay fikradda xayeysiinta udhaxeysa waxaanan ku tusnay afar dariiqo oo aad si guul leh ugula midoobi karto suuqgeynta waxyaabaha ku jira. Waa inaad isticmaashaa tilmaamahan iyo tabahaan si aad u qaabeyso ololeyaal xayeysiis oo wanaagsan, laakiin hubi inaad qorto faallo haddii aad u baahan tahay talo soo jeedin dheeraad ah oo naga socota - waan ku farxi lahayn inaan ka jawaabno!
Tags: xayeysiis hooyoqeexitaanka xayeysiintatirakoobka xayeysiintatalooyinka ku saabsan xayeysiintaxayeysiiska bandhigga hooyoka baxsanwarbaahinta bulshadawaxyaabaha la soo jeediyey
Alice Jones waa suuq-yaqaan dijitaal ah oo ka socda San Francisco, California. Waxay qoraysaa qoraallo blog ah sida ugufiican dib u bilaabaan adeegyada iyo wakaaladaha abuurista waxyaabaha. Alice waa hooyada laba socod baradka iyo xirfad baradka yoga.